Ndụmọdụ Betgba Egwuregwu Elite - July 1 - blog blog - jluis37.com
Belgium na Italytali – Otu abụọ a ga – enye goolu – Ee @ 2.03
Abụọ n’ime titan asọmpi ga-alụ ọgụ na nkeji iri na ise n’egwuregwu nke na-agaghị elebanye anya na Final. Ndị Beljọm, ndị bụ ndị nke 1 kachasị dị n’akụkụ ụwa, ka ga-efunahụ egwuregwu ma naanị otu ihe ha meriri megide onye otu na-eme egwuregwu ikpeazụ na akụkọ Denmark. Romelu Lukaku nọ na-enwu ọkụ na mgbe oge zuru oke na-agbachitere Italiantali na Inter Milan, ọ ga-enwe obi ike n’ịchọta ụgbụ ahụ ọzọ. ,Tali, bụ ndị ọkacha mmasị dịkarịa ala na 2.39, lanarịrị egwu dị egwu megide Austria mana ha ga-enwe ọdụ ha ịmara ihe nọ na nsogbu yana eziokwu ahụ bụ na Eden Hazard na Kevin de Bruyne ga-efu na akụkụ Roberto Martinez. Ọbụna na enweghị ndị egwuregwu abụọ a, ị nweghị ike ịgụta ndị Belgium, bụ ndị guzogidere mwakpo ndị Portuguese na gburugburu 16 ma kwụsie ike ịga n’ihu. Laa azụ n’akụkụ abụọ iji chọta ụgbụ na nkeji iri na ise ikpeazụ nke kwesịrị ịnwe televishọn tụgharịrị n’akụkụ ụwa niile. 1 nkeji.
James Duckworth na nke Sam Querrey – Akara Dị Mma – 3-0 Querrey @ 2.70
Sam Querrey nwere ike ịmalite mmalite siri ike na 2021, mana obi abụọ adịghị ya na oge ahịhịa mere ka ọ laghachi na tenis nke hụrụ ya mgbe ọ rutere World # 11 na mbido 2018. Na-akụtu Pablo Carreno-Busta na gburugburu 1 na ogologo setịpụrụ, Querrey na – enweta ohere iji kpaa ihe ya na UK, yana egwuregwu dị mma megide Aussie James Duckworth. Duckworth nwere ike imeri Radu Albot na-agba mgba na gburugburu 1 oge a, mana ọ gbalịsiri ike na ahịhịa n’oge na-adịbeghị anya, na-efu na Round 1 na Eastbourne n’izu gara aga na 237 họọrọ, na onye ibe Aussie, Max Purcell. Querrey & Duckworth gbara egwu na Stuttgart ọnwa gara aga, na ahịhịa, ebe Querrey nwetara mmeri mmeri. Anyị na-atụ anya ka ọ mee otu ihe ahụ. 1 nkeji.
Milwaukee Bucks na Atlanta Hawks – Hawks N’okpuru 107.5 @ 1.85
O doro anya na nhọrọ a ga-emetụta oke nhọrọ a ma Trae Young na-egwu ma ọ bụ na ọ bụghị, mana m na-atụle eziokwu ahụ na ọ gaghị abụ 100% ma ọ bụrụ na ọ na-egwu egwu. Ya mere, ka anyị lee elekere ole na ole anya. Udiri akara Hawks maka akara egwuregwu niile bụ 105.9, na-ele usoro isiokwu a ị ga-enweta 104.8. Hawks nkezi na-enweghị Trae Young maka oge ’20 -’21 bụ 104.8. Ego iji chebe onwe maka ihe a bụ 104.7. Ugbu a, anyị enweghị akara nchebe maka Bucks na-enweghị Giannis maka ihe egwuregwu ahụ mana na-elele ọkwa ha na-agbachitere n’oge a ma na-atụnyere ya na ọkwa ha na-agbachitere mgbe ọ bụla Giannis anaghị egwu, n’ụzọ na-akpali mmasị, anyị nwetara 111.4 wee mezie ka 108.6 na-enweghị Giannis . Aga m ekwu na nke a niile na-ahọrọ nhọrọ m ma yabụ m zuru ike. 1.5 nkeji.
F1 – Grand Prix nke Austria 2021 Race – Top 3 – Valtteri Bottas @ 1.89
Ihe gbanwere site na izu ruo izu na afọ na afọ na Formula 1. Otu ihe na-agbanwe agbanwe kemgbe afọ anọ gara aga bụ izugbe izugbe nke Valtteri Bottas dị ka onye ọkwọ ụgbọ ala # 2 maka Mercedes. Mgbe ụgbọ ala ya ma ọ bụ ndị otu ya emeghị ka ọ daa mbà site na mmebi ma ọ bụ mkpebi mkpebi, ọ na-adị ogologo oge ma nwee ike merie mmeri 9 n’oge gara aga 4 na ọkara oge asọmpi maka Mercedes. Anyị hụrụ ọnụahịa a ka ọ bụrụ obere mkparị maka onye ọkwọ ụgbọ ala merie agbụrụ a ugboro abụọ na ọrụ ya ma ọlị mgbe ọ kwụsịrị na ikpo okwu na sekit a ebe ọ bụ na ọ kwagara n’òtù asọmpi na 2017, gụnyere ebe 3 nke izu gara aga n’egwuregwu a. N’iburu ụdị ọsọ a dị ịrịba ama na Red Bull Ring, 1.89 yiri ka ọ bụ nnukwu ọnụ ahịa anyị. A nwara anyị ọnwụnwa ịhapụ otu ọkara na Bottas iji merie agbụrụ ahụ kpamkpam na elekere 12.00, mana anyị ga-akwụsị nke ahụ wee were ọnụahịa dị oke nchebe karịa ka ọ gwụ na ikpo okwu. Nkeji 2.
Jeremy Chardy na nke Ilya Ivashka – Onye mmeri – Chardy @ 2.15
Chardy mere nke ọma megide Aslan Karatsev na agba nke mbụ. Ọrụ ya dị oke mma, na-etinye akara 18 ka ọ wepụ Karatsev na usoro 3. O yiri ka ọ bara uru na ọnụahịa ahụ na 2.10, nke na-egosighi arụmọrụ ya na asọmpi a. Ọ bụrụ na ọ nwere ike ịmeghachi arụmọrụ ya ọzọ, egwuregwu a kwesịrị ịdị mfe karị. 1 nkeji.
Site na Open Championship dị nso (July 15th) n’akụkụ, Pepperell na-ahụ n’anya ga-achọ inweta akwụkwọ ịkpọ oku na mbipụta 2021 na Sandwich, Kent. Open Irish nyere ya ohere ahụ, ọ bụkwa n’egwuregwu a ka ọ ruru eru laghachi na 2015. Na ebumnuche ịbịa n’elu atọ n’ime ndị egwuregwu ugbu a na-erughị eru ọ ga-enwerịrị mmasị na ọ ga-achọ ka ọ nwee ohere ịmeghachi ihe a. Ọ na-abịa ebe a n’azụ na-efu mbepụ na Germany, enyere ya aka, agbanyeghị na o mere mbido atọ gara aga tupu nke ahụ, abụọ n’ime ha na-ebute Top 20 agwụ. Na-echekwa na o meela mpi a ugboro anọ n’ime ugboro isii, atọ n’ime ha mechara bụrụ T4 (’19), T8 (’16) & T2 (’15). Pepperell anọwo na nke kacha mma nso n’ụlọ ya, dị ka onye mmeri nke ndị Nna-ukwu nke Britain bụ ndị na-eyi egwu na ihe omume ahụ mechara, yana Wentworth na Irish, Scottish na Welsh na-emepe afọ. N’ezie, isii n’ime ọrụ iri kacha elu nke ọrụ ya batara na UK na Ireland… naanị mmadụ ise n’ime ụwa Top 50 bịara, ọnụahịa a dị oke mma! 1 nkeji.
Ntuziaka Community a na-abịa site na yolo1935 bụ ndị ahọrọla ihe ndị a.
Czech Republic na Denmark – 1 × 2 – Denmark @ 2.11
Denmark na-achọ ọfụma ka ọ na-abanye na njedebe nke European Championship. Ndị Danes gosipụtara oke mkparịta ụka megide Wales, na-atụle ihe mgbaru ọsọ anọ ma na-ekwupụta na ọ ga-ekwe omume ịbụ otu n’ime ịnyịnya gbara ọchịchịrị iji merie asọmpi ahụ. Na egwuregwu abụọ ha gara aga, akụkụ ndị Danish jiri ọkpụ goolu asatọ gbatara ha, bụ nke gosipụtara ọgụ mbuso otu a. N’aka nke ọzọ, ndị Czech juru ọtụtụ ndị egwuregwu bọọlụ n’anya gburugburu ụwa, na-achịkwa iwepụ Netherlands na agba nke asatọ site na mmeri 2-0. N’agbanyeghị akụkụ abụọ ahụ na-ele anya n’ụdị kachasị mma ha banye n’egwuregwu a, m ka na-ebu amụma mmeri site na Denmark, na-aga n’ihu na-egosipụta oke iwe ha na-egosi oke obi ike na mkpali ha.